ULondolozo lweeNkcukacha eziBalulekileyo LWEMIGODI-Funda ukuRhweba
IHashrate yeBitcoin Yehla Kakhulu Phakathi kwezidubedube zaseKazakhstan
Uqhushululu lwasekuhlaleni oluqhubekayo eKazakhstan lubangele umdla kwabaninzi malunga nefuthe elinokuba nalo kwi-bitcoin hashrate yehlabathi. Ezi nkxalabo zivela njengoko iKazakhstan ikholelwa ukuba ilawula ubuncinane i-18% ye-hashrate yehlabathi, ngokutsho kwengxelo yamva nje evela kwi-Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF).
I-NABCD iqinisekisa i-Bitcoin engachatshazelwanga yiNgxaki yaseKazakhstan
Oko kwathiwa, abahlalutyi babika ukuba kwiintsuku ze-30, amandla e-Bitcoin hash aye awela malunga ne-15% kwiintsuku ezilishumi zokugqibela. Iingxelo ezintsha ezivela kwii-arhente zeendaba zendawo zibonisa ukuba isiphithiphithi soluntu sinciphile kwaye i-Data Centre Industry Industry kunye ne-Blockchain Association yaseKazakhstan (NABCD) iye yaqinisekisa ukuba isiphithiphithi soluntu asichaphazeli abasebenzi basezimayini zedijithali. Nangona kunjalo, abaninzi baye baxoxa ukuba imiba yakutshanje eKazakhstan iye yangena kwi-Bitcoin yabasebenzi basezimayini kule veki iphelileyo.
Kwiintsuku ezintlanu kuphela ezidlulileyo, i-BTC yatshintshisa izandla kwi-46,700 yeedola ngeyunithi. Nangona kunjalo, i-benchmark cryptocurrency ukusukela oko yehla ngaphezulu kwe-12% yexabiso. Oko kwathiwa, malunga neentsuku ezingamashumi amathathu ezidlulileyo, i-mining mining rig esebenza kakuhle elawula i-terahash ye-100 ngesekhondi (TH / s) ifunyenwe phakathi kwe-$ 25 ukuya kwi-30 yeedola ngosuku, ngomatshini, ngesantya sombane se-$ 0.12 nge-kilowatt-yure. Namhlanje, le rig efanayo yemigodi iqonda kuphela i-$ 14.87 ngosuku, ngexesha lokushicilela, usebenzisa izinga elifanayo lokusetyenziswa kwamandla. Ngaloo nto, kucacile ukuba ukuhla kwexabiso le-BTC, ngokwenene, kuchaphazele amandla e-cryptocurrency ye-hash, njengoko i-hashrate ngoku yehla nge-15%.
Esinye isizathu sokuhla kwe-hashrate ye-15% luhlengahlengiso lwamva nje lobunzima bemigodi. Ubunzima bemigodi ye-BTC burekhoda ukwanda kwe-8 kaJanuwari, njengoko ubunzima bokumbiwa kwemigodi butsibe nge-0.41%. Ngelixa oku kubonakala ngathi kukunyuka okuncinci, olu hlengahlengiso luzise i-BTC kufutshane neyona ndawo yobunzima, kulandela uhlengahlengiso olulungileyo oluthathu olulandelelanayo.
Ngaphezu koko, abahlalutyi baqikelela ukuba ubunzima bezemigodi bunokulungelelanisa ngokufanelekileyo, okwesine ixesha elilandelelanayo, kwiintsuku ezilishumi elinanye ezizayo nge-0.67% kwinqanaba langoku.
tags Bitcoin, Kazakhstan, UKUSHUMAYELA, iindaba
Ingeniso ye-Bitcoin yemigodi yemihla ngemihla inyuka ukurekhoda amaxabiso aphezulu njengeXabiso leMinqamlezo $ 50,000
Bitcoin (BTC) abasebenzi basezimayini barekhode ukonyuka okukhulu kumvuzo wabo xa bebonke kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, njengoko ibhloko ivuza imivuzo. Ngokwedatha yakutshanje evela kumnikezeli wohlalutyo iGlassnode, ingeniso yemigodi ye-BTC inyuke ngaphezulu kwe- $ 40 yezigidi ngemini ngo-Okthobha, ukonyuka okukhulu kwe-275% ukusuka kwiintsuku eziphambi kwesiqingatha.
Ingeniso yemigodi ye-BTC ibonakalise ukujika okuhle ukusukela kumnyhadala osisiqingatha ngoMeyi 2020. Esi siganeko sihleli siyenye yezona zinto ziphambili emva kweBitcoin 2020 - 2021 yenkomo. Oko kwathethi, i-BTC ikhule ngaphezulu kwe-500% ukusukela ngoMeyi 2020.
Ngaphandle kokuthatha i-hit enkulu kwisithintelo semigodi yase China, esibonileyo isantya se-Bitcoin hash siwela ngaphezulu kwe-50%, inqanaba lezemigodi lirekhode ukubuyela kwimeko entle ngo-Agasti nangoSeptemba. Okwangoku, inqanaba lezemigodi lisondele kwindawo yalo ephezulu kwimbali ye-BTC. I-Glassnode icacise ukuba:
“Khumbula, abasebenzi basezimayini beBitcoin baneCAPEX (izixhobo zokusebenza, izibonelelo, izinto zokusebenza) kunye ne-OPEX (amandla, abasebenzi, ulondolozo, njalo njalo. Xa kuthelekiswa ingeniso yemigodi ekhoyo ngoku eyi- $ 40M ngemini kwingeniso eqatshelwe kumnyadala ka-2020, siyabona ukuba ingeniso yabavukuzi inyuke ngama-275% ukusuka kwixesha eliphambi kwesiqingatha se- $ 14M ukuya kwi- $ 18M / ngosuku kunye + nama-630% xa kuthelekiswa ixesha elinqumle emva kwesiqingatha se- $ 6M ukuya kwi- $ 8M / ngosuku. ”
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukelwayo-Okthobha 5
I-BTC ekugqibeleni iphinde yavela ngaphezulu kwe-50,000 elindelweyo kwaye inokwenza indlela yayo ukuya kwi-51,000- $ 52,000 yengingqi kwiintsuku ezizayo. Olu qikelelo luya lubonakala ngakumbi xa sibandakanya ukwakheka komnqamlezo wegolide oshukumisayo kwitshathi yethu yeeyure ezi-4.
Oko kwathiwa, sinokurekhoda ubuthathaka obusondeleyo kufutshane ne- $ 51,000 njengoko abarhwebi bethutyana bethatha inzuzo kwaye i-BTC inciphisa iimeko ezingaphezulu kwexesha. Kwimeko yokulungiswa ukusuka kwixabiso langoku, silindele ukuba inkxaso ye-48,000 yeedola ibuyise ukwehla okulandelayo kunye nokunyusa ixabiso liphezulu.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 50,500, i- $ 51,400, kunye ne- $ 52,500, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 49,500, $ 48,500, kunye ne- $ 48,000.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 944.2 billion
I-Bitcoin Dominance: 43.1%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, UKUSHUMAYELA, iindaba, Uhlalutyo lobuGcisa
I-China Cryptocurrency Mining Clampdown: U-Anhui ujoyina uLuhlu olukhulayo
Ukuhlaziywa: 14 Julayi 2021
Iphondo leMpuma yeAnhui e-China lijoyine uluhlu olukhulayo lwengingqi zase-China zokulwa neenkampani zemigodi ye-cryptocurrency kunye nokusebenza. Ngokwengxelo zalapha, abasemagunyeni baceba ukuvala izibonelelo zemigodi kwiphondo kwaye bathintele iiprojekthi ezintsha ezonga umbane ukulawula ukusilela kwamandla kummandla.
Ngokwendlu yeendaba yasekuhlaleni ephethwe ngurhulumente i-Hefei Media Group, abasemagunyeni baceba ukulunyula lo mmandla wezixhobo zemigodi ukulawula ukuhla kwamandla ombane kule minyaka mithathu izayo.
Amagosa karhulumente alindele ukuba umbane eAnhui unyuke ukuya kwizigidi ezingama-73.14 zeekhilowathi ngowama-2024. Okwangoku eli phondo livelisa iikhilowathi ezingama-48.4 ezigidi, nto leyo ebonisa ukungasebenzi kakuhle komthamo wemveliso yamandla ombane urhulumente afuna ukuwunciphisa. Ngaphandle kokuthintela imisebenzi yemigodi ye-cryptocurrency kunye nezinye iiprojekthi ezisebenzisa amandla, iphondo likwacwangcise ukulungelelanisa amaxabiso ombane ukukhuthaza ukusetyenziswa kwamandla ngakumbi kuqoqosho.
I-State Grid Corporation yase China isasaza izaziso zokuvalwa kwee-Cryptocurrency Miners
I-Global Times, umenzi wephephandaba phantsi kwePeople's Daily, uthumele umyalezo malunga nolu phuhliso lutsha, esithi: "Ngoku, phantse iipesenti ezingama-90 ze # China's #Bitcoin amandla emigodi sele (sele evale)." Nangona iAnhui ingeyondawo yemigodi eTshayina, isigqibo sayo sigxininisa ukuqhekeka okuqhubekayo kweli lizwe, eliye labona iindawo zemigodi kwiindawo ezinjengeSichuan, iXinjiang, iQinghai, iYunnan kunye ne-Inner Mongolia zigxotha abasebenzi basemgodini.
Ummeli owaziwayo waseTshayina u-Colin Wu, odume njenge 'Wu Blockchain' UTwitter namhlanje ukuba i-State Grid Corporation yase China (SGCC) ikhuphe isaziso sokuvalwa kwabavukuzi be-crypto kwilizwe liphela. UWu wongeze wathi:
Okwangoku, amanye amaphondo angenamandla ombane eTshayina, afana noHenan noAnhui, nawo sele eqalile ukuwuphumeza.
Ummeli we-crypto ukwatyhile ukuba iGansu, iphondo laseMantla Ntshona eTshayina, ifumene imemo kwi-SGCC nayo. Intatheli ye-crypto iqaphele ukuba i-SGCC "Ulawula uninzi lombane wase China, kodwa esi saziso sibonakala sisemthethweni."
tags iTshayina, Cryptocurrency, UKUSHUMAYELA, iindaba
Izitishi zeBitcoin njengesiCwangciso saMandla esiDala saMandla esi-3 seHlabathi sibhengeza iSicwangciso seMigodi ye-BTC
Isikhululo saMandla iMechanville 1897, esona sigaba samandla esidala sesithathu sehlabathi, sibhengeze ukuba siyangena Bitcoin (BTC) imigodi. Ifemu iqaphele ukuba iza kusebenzisa amanye amandla ewavelisayo ukwenza lo msebenzi.
UJim Besha, i-CEO yeAlbany Engineering Corp, uqaphele ukuba isityalo esidala sesigaba se-3 samandla ombane we-AC sijonga ukumba umgodi weBitcoin njengeyona nto inenzuzo xa kuthelekiswa nokuthengisa amandla abo.
Olu phuhliso lutsha luza phakathi kwengxwabangxwaba ngoososayensi bezendalo malunga nefuthe lekhabhoni yonyuso lwe-cryptocurrency. Kutshanje, uninzi lweefemu zemigodi eTshayina ziye zanyanzelwa ukuba zivalwe ngabasemagunyeni kwaye zifudukele kwezinye iindawo ezinobuhlobo zeBTC. Ngenxa yoko, i-crypto yafumana ingozi enkulu kwaye ayikabikho kuyo. Ngexesha lokushicilela, i-Bitcoin yehle ngaphezulu kwe-50% ukusuka ngo-Epreli lonke ixesha eliphakamileyo le- $ 64,800.
Ukutshilo, u-Besha uqinisekisile ukuba iingxoxo zangoku ezijikeleze ukukhathazeka kwamandla e-BTC azimkhathazi njengoko inkampani yakhe isebenzisa amandla ahlaziyekayo. Wongeze ngelithi ukumbiwa kwemigodi sisincoko ecaleni njengoko belahla iiseva ezisetyenzisiweyo. I-CEO yathi:
“Yeyona ilungileyo [uhlobo lwezimbiwa ze-bitcoin] kuba sisebenzisa amandla ahlaziyekayo. Siyenza ecaleni, sizama ngayo. Sithenga iiseva esele zisebenzile. ”
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukela-nge-11 kaJulayi
U-Bitcoin uchithe uninzi lweempelaveki edibanisa phakathi kwe- $ 34,000 kunye ne-33,000 yeedola njengokungazinzi kunye nevolumu yokuthengisa ibaleka inciphile. Nangona kunjalo, i-BTC ngoku iqhuba ngaphakathi ngaphakathi, ibonisa ukuba i-spike (ulwalathiso aluqinisekanga) lunokwenzeka kungekudala.
Oko kwathiwa, ukuthanda kwethu kuya kwicala elingaphezulu njengoko silindele ukubuyela kwakhona kwi-35,000 yeedola. Isithintelo se- $ 34,000 yinto ebalulekileyo yeBitcoin kwiiyure ezizayo, kuthathelwa ingqalelo ukudibana kwemigca yokuxhathisa kwelo nqanaba (ngaphezulu komda, i-200 SMA, umgca wokumelana).
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 33,000, i- $ 33,700, kunye ne- $ 35,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 32,000, $ 31,000, kunye ne- $ 30,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.40 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 632 billion
I-Bitcoin Dominance: 45.2%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, UKUSHUMAYELA, iindaba
Iirekhodi zeBitcoin eziCothayo kwimveliso yeBhlokhi kwiminyaka phakathi kweChina yokumba iMigodi
Ukuhlaziywa: 29 Juni 2021
Ngenxa yokuqhekeka okuqhubekayo kwe Bitcoin (BTC) Abasebenzi basezimayini e-China, izinga leengqekembe zemali ezisandula ukwenziwa zehle kakhulu kwi-58 yemali entsha mihla le, ngokwengxelo ye-Glassnode. Okwangoku, ingeniso yezemigodi itshonile ukurekhoda ubuncinci kwinyanga ephelileyo, njengoko uluntu lwaseBitcoin lulungisa ukugxila kohlengahlengiso oluzayo lobunzima.
Ngokweengxelo, i-Bitcoin hashrate yehle nge-40% kwinyanga ephelileyo. Oku kwehla sisiphumo esithe ngqo sokwanda okuthe kratya kwabavukuzi be-BTC ngurhulumente wase-China.
Ngokwesiqhelo, iBitcoin entsha iyambiwa rhoqo kwimizuzu elishumi. Nangona kunjalo, izolo, ukubala okuphakathi kungaphaya kwemizuzu engama-23. Eli xesha lokumba umgodi lelona liphezulu lirekhodwe yinethiwekhi kwisithuba seminyaka elishumi.
Ngenxa yoko, oku kwehla kwinani elitsha le-BTC kunciphise inani leemali ezintsha ezingena kwimarike izolo. Ukubalwa kweBitcoin izolo izolo kuye kwafikelela kuma-58, xa kuthelekiswa nomndilili we-144 yemali entsha ngosuku. Eli nani libonisa ukwehla okukhulu ngama-60%.
IGlassnode ikwabonakalise ukuba umyinge wengeniso yemihla ngemihla efunyenwe ngabavukuzi be-BTC yehle kakhulu. Ukusukela ngo-Epreli nangoMeyi, ingeniso yemigodi yemihla ngemihla ifikelele kwi-70 yezigidi zeedola. Okwangoku, elo nani limalunga nezigidi ezili-13 zeedola.
I-Bitcoin ibonakala isendleleni ezinzileyo yokubuyela kwimeko yesiqhelo njengoko imakethi ebanzi iphinda ibuye ibuye. Nangona kunjalo, ibhentshi yemali yedijithali iyaqhubeka nokuma kwinqanaba lama- $ 35k kwiveki ngoku.
Oko kwathethileyo, ikhefu elizinzileyo ngaphezulu kwe-35k yeedola yokuchasana kufuneka ibeke i-BTC kwindlela yokubuyisela kwi-36k yeedola, apho kuhlala khona iiyure ezingama-4 ze-SMA 200. Ukusilela ekucimeni ukunganyangeki kwengqondo ngokwama- $ 35k kungathumela i-BTC kwingingqi engama- $ 33k. Ukuqhubela phambili okulandelayo ukusuka kwelo nqanaba kufuneka kuhambise imali yokuqala yedijithali kwindawo eyi-31k yeepivot.
Amanqanaba aphambili eBitcoin ukuze ubukele-nge-29 kaJuni
Ngelixa abasebenzi basezimayini be-BTC beqhubeka nokunyusa uxinzelelo lokuthengisa kwi-Bitcoin, i-benchmark cryptocurrency ibonakala ngathi ibambe i-fort njengeenkunzi zeenkomo ziyigcina kufutshane nephawu le- $ 35k. Iinkunzi zeenkomo zithintele ukuwa kwinqanaba le-35,000 yeedola ukusukela oko yabuyela kwinqanaba leedola ezingama-30,000 ngoMgqibelo odlulileyo.
Oko kwathethi, i-BTC kufuneka ihlale ijikeleze eli nqanaba ngaphezulu kweeyure ezizayo okanye umngcipheko wokuwa ngaphantsi kwenkxaso ye-33,750 35 yeedola. Ukhuselo oluyimpumelelo lwamanqaku angama- $ 36,000k kufuneka luvule indlela yokujolisa kumxhelo olandelayo; $ XNUMX.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 35,000, i- $ 36,000, kunye ne- $ 37,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 33,750, $ 33,000, kunye ne- $ 32,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.43 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 659 billion
I-Bitcoin Dominance: 45.9%
Ukuhla kweBitcoin njengoko i-Iran ithimba oomatshini bezemigodi abangama-7,000 be-BTC
Ngokwengxelo zalapha, amapolisa aseIran abambe i7,000 ngokungekho semthethweni Bitcoin (BTC) izixhobo zemigodi. Umphathi wamapolisa waseTehran, uGeneral Hossein Rahimi, uqaphele ukuba oomatshini balahliwe kwifama enemigodi entshona kwikomkhulu.
I-IRNA, indlu yeendaba yasekhaya, yongeze ukuba oku kuthinjwa kwezixhobo zemigodi yeyona inkulu kwimbali yemigodi ye-cryptocurrency.
Imigodi ye-Cryptocurrency ngumsebenzi osemthethweni e-Iran. Abasebenzi basemgodini kufuneka babhalise kwaye bafumane iphepha-mvume kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezemveliso, Wezam, kunye Nezorhwebo. Nangona kunjalo, abasemagunyeni bathi uninzi lwabasebenzi mgodini bakhetha ukuhamba ngasemva kweenkqubo ezisemthethweni zokuqhuba kwaye basebenze ngokungekho mthethweni eIran.
Ngokwengxelo ka-Elliptic, inkampani ye-blockchain analytics, malunga ne-4.5% yayo yonke imigodi yeBitcoin eyenzeka e-Iran, kwaye ilizwe eli liye laqesha ukusetyenziswa kwemali ye-cryptocurrency njengendlela yokudlula kwezohlwayo.
Ukongeza, i-Elliptic ityhile ukuba imigodi ye-crypto ifuna ukulingana malunga nezigidi ezili-10 zemiphanda yeoyile ekrwada ngonyaka, okanye iipesenti ezi-4 zokuthunyelwa ngaphandle kweoyile e-Iran.
Urhulumente wase-Iran ugunyazise ukuba abasebenzi basezimayini baseBitcoin bathengise i-BTC yabo esandula ukuyilwa ngqo kwibhanki esembindini, esetyenziselwa ukuxhasa ngemali ukungenisa elizweni. Urhulumente ukwayalele ukuba iibhanki zorhwebo kunye notshintshiselwano lwemali zisebenzise i-BTC ethathwe ngokusemthethweni ukuhlawulela ukungeniswa.
Amanqanaba aphambili eBitcoin ukuze ubukele-nge-22 kaJuni
I-Bitcoin iye yafumana i-roller coaster-like momentum kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo, njengoko iibhere ziqhubeka nokulawula isenzo sexabiso. I-cryptocurrency ebekiweyo ibekwe kwi- $ 36,000 ukuya kwi- $ 31,000 ephantsi izolo kodwa yabuya ngobunono ukuya kwinqanaba lama- $ 33,000. Nangona kunjalo, iibhere azenzekanga nge-cryptocurrency kwaye ziyithumele kolunye uhambo lwe-bearish namhlanje. I-cryptocurrency ephambili ishiye indawo ye- $ 33k yaya kuthi ga kwi-28,800 yeedola namhlanje, isaphula i-31 yeepivot.
Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo zibonakala zithatha ulawulo ukusuka kwinqanaba lama-28,800 eedola kwaye zityhale imali yokuqala yedijithali kwindawo ephezulu- yeedola ezingama-32k ngoku.
Iiyure ezizayo ziya kuba luncedo koluphi ulwalathiso lwe-BTC olurhweba ngokulandelayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 33,000, i- $ 33,750, kunye ne- $ 35,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 32,000, $ 31,000, kunye ne- $ 30,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.30 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 611.9 yeebhiliyoni
I-Bitcoin Dominance: 46.9%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, Iran, UKUSHUMAYELA, iindaba
Ingxaki yeBitcoin yeHashrate: Unxibelelwano phakathi kwexabiso le-BTC kunye neHashrate
Ukusukela ekudalweni kwayo ngo-2009, i-rally yexabiso le-Bitcoin yemali ihleli njengesihloko esinokuphikiswa kwimithombo yeendaba. Ngelixa iimpapasho ezininzi zingayikhathaleli i-BTC njenge-asethi eguqukayo kakhulu kwaye ilebhile ixabiso lentsebenzo ngokungacwangciswanga, ezinye iiseti zedatha zibonisa ukuba ukunyuka kwamaxabiso kuchatshazelwa ziimetrikhi ezaziwayo.
Ngokwedatha evela kwi-Blockchain.com, iposti yeReddit, ethi inyuse imbali yexabiso le-BTC yokuchonga imeko, iqaphele ukuba kukho unxibelelwano olungaqondakaliyo phakathi kwe-Bitcoin's hashrate kunye nesenzo sayo sexabiso.
Ngokusekwe kwitshathi, amaxabiso e-BTC ngesiqhelo "abuyela-kwi-the-intsingiselo" yedatha engafakwanga hashe, ngezihlandlo ezilishumi elinanye ezicacileyo zokunxibelelana namaxabiso e-hashrate ebalwe ngokwe-logarithm. Sebenzisa le metric kurhwebo lweevenkile, ukubonwa kungqineka kuluncedo njengokuthenga i-BTC emva kokuba amaxabiso enqumleza ngaphezulu kweziphumo zexabiso le-hashrate kwiziphumo ze-wave yenkomo enkulu kumatyeli amane, kulandele ukwehla okuthe chu.
Olu nxibelelaniso luphakamisa isenzo sexabiso le-BTC njengayo nayiphi na into ngaphandle kokungahleliwe, uninzi lwabacingeli kunye nabahlalutyi bathanda ukuthetha. Ukongeza, amaxabiso entengiselwano, umsebenzi wexabiso, uhlalutyo lobuchwephesha, kunye nezinto ezisisiseko ezichaphazela isenzo sexabiso le-BTC, kakhulu njengeemarike zemali zesiko.
Hashrate kunye nokuBaluleka kwayo kwiNethiwekhi yeBitcoin
Kwi-newbies, i-hashrate ibhekisa "kumandla okuthenga" womnatha weBitcoin. Ibhekisa kumandla ewonke edityanisiweyo odityanisiweyo asetyenziswa nangawuphi na umzuzu othile kwimigodi nasekuqhubeni intengiselwano kwinethiwekhi yeBitcoin. I-Hashrate ilinganiswa kwiiyunithi ze-hash / yesibini, ezimele inani lokubala iinkqubo zenethiwekhi umzuzwana ngamnye.
I-hashrate ephezulu ngokwesiqhelo ithetha ukuba uninzi lwabasebenzi mgodini, ukuguqulela kukhuseleko olungcono kwinethiwekhi. Amanqanaba aphezulu e-hashing akhusela inethiwekhi ngokuchasene neepesenti ezingama-51 zokuhlaselwa.
Okwangoku, i-hashrate yeBitcoin okwangoku ikwiqondo eliphantsi ukusukela ngo-Novemba 2020, kulandela izinto ezixhonyiweyo ngurhulumente wase-China ukulilisa ilizwe kwimisebenzi yolawulo lwemali ngokubanzi. Ngokutsho kweBitinfocharts, Bitcoin i-hashrate yehle nge-91.2 exahash ngomzuzwana (EH / s), i-46.7% yehla ukusuka kwiiveki zayo ezintandathu eziphakamileyo kwi-171.4 EH / s.
I-analytics firm ikwabonakalisile ukuba inzuzo yezimbiwa ze-BTC yehlile ukusuka kwincopho yayo ye- $ 0.449 ngemini ngeterahash ngomzuzwana ukuya kwi-0.226 yeedola.
I-Hashrate Drop ibangela i-Bitcoin Crash
Akumangalisi ukuba ukuhla kwangoko kwe-hashrate kujongise ukubetha okuluhlaza kwixabiso le-BTC. Ngexesha lokushicilela, i-benchmark ye-cryptocurrency ithengisa kwindawo engama-30,000 yeedola (-5% namhlanje).
Oko kwathiwa, abalindeli balindele ukuba abasebenzi basezimayini abafudukelwe e-China bafumane indlela eya kwezinye iindawo zeemigodi ze-BTC, ngakumbi iTexas eMntla Melika. Le ntshukumo yeyona nto ibalulekileyo yokufuduka kwabavukuzi kwimbali yeBitcoin.
Nje ukuba abasebenzi basezimayini babuyele kwisingqisho sabo sangaphambili, sinokulindela ukubona iBitcoin iphakama inyukela kwiindawo zayo eziphakamileyo zamva nje.
tags Bitcoin, Cryptocurrency, Hashrate, UKUSHUMAYELA, iindaba
I-Bitcoin Mining Ban e-China: AmaPhondo amaninzi akhupha ii-Orders ze-Halt
Iinzame zikarhulumente wase-China zokulwa i-Bitcoin kunye nemigodi ye-cryptocurrency kuwo onke amaphondo abonakala ngathi asebenze ngokupheleleyo. Olu lwaphulo-mthetho lwaqala nge-Inner Mongolia, emva kokutyhilwa kwemithetho emitsha ngokuchasene nokusebenza kwamaziko emigodi yeBitcoin kwingingqi.
Iingxelo ngezicwangciso zikarhulumente zokuvala imisebenzi yezemigodi kwi-Inner Mongolia yavela ekuqaleni kuka-Matshi 2021.
Ukuphela kuka-Meyi ka-2021, iOfisi yoLawulo lwaMandla eSichuan yapasisa imemo kubachaphazelekayo ababiza intlanganiso yokuxoxa ngeziphumo zemisebenzi yezemigodi kulo mmandla. Okwangoku, akukabikho sibhengezo sokuvalwa kwemisebenzi yezimbiwa zeBitcoin kwiPhondo laseSichuan.
Izolo, nge-9 kaJuni, ngo-2021, iingxelo ezintsha zengingqi ziveze ukuba i-Bitcoin Miners e-Xinjiang ifumene iileta ezivela phezulu zokumisa ukusebenza kwazo kwangoko.
Imemo ezifanayo zokumiswa kwemigodi ziye zadluliselwa kumaziko ezemigodi eBitcoin kwiPhondo laseQinghai izolo. Iingxelo zibonise ukuba isaziso sivela kwiQinghai Industry and Information Technology Department. Imemo iqaphele ukuba amashishini kwingingqi aya kuhlolwa ngelixa iiprojekthi ezikhoyo zemigodi kufuneka zimise ukusebenza.
I-Bitcoin Mining Ban ibangela ukuhla kwe-BTC Hashrate
Egqabaza ngalo mbandela, intatheli yengingqi uColin 'Wu' IBlockchain ibhalele ukuba uninzi lweemigodi zeBitcoin zenzeka kumaphondo. Intatheli yase China ichaze ukuba:
“Mithathu imimandla enemigodi eTshayina. Ngaphakathi iMongolia ime ngokupheleleyo, iSichuan ayinakuyeka, ke imeko yaseXinjiang inzima ngakumbi. Igama elisetyenzisiweyo kolu xwebhu kukumisa ukulungiswa, nto leyo ingqongqo njenge-Inner Mongolia. ”
Ngeli xesha, inethiwekhi iyonke ye-Bitcoin hashrate ithathe ukubetha okukhulu ngenxa yophuhliso lwamva nje eXinjiang. Ngaphambi kweendaba, i-BTC hashrate yayikwi-180 exahash ngomzuzwana (EH / s). Ngexesha lokushicilela, nangona kunjalo, i-hashtrate ye-BTC SHA256 yehle yaya kwi-120 EH / s.
tags Bitcoin, iTshayina, Cryptocurrency, UKUSHUMAYELA, iindaba
Abaphathi bamandla eSichuan babiza ukuxoxa ngeMigodi yeDijithali yemigodi
Kutshanje, urhulumente wase-China ufumanise ngakumbi malunga cryptocurrency Uqoqosho, luqwalaselwe kakhulu kwimisebenzi yemigodi yeBitcoin.
Urhulumente wase-China uxele izicwangciso zakhe zokwenza ukuba ilizwe lingathathi cala nge-2060 kwaye lifake ipesenti elungileyo yokungathathi cala ngo-2030.
Oko kwathethi, iinkampani ezininzi ezisekwe kwi-crypto sele ziqalisile ukumisa iinkonzo kwilizwe lase China, kulandela iintlanganiso ezimbalwa ezivela kwiBhodi yozinzo lwezeMali yaseTshayina. Ezinye iinkampani ezisekwe kwi-crypto ezinqumle ubudlelwane neChina zibandakanya iHuobi, iBtc.top, iHashcow, kunye ne-OKEx.
Ingxelo entsha ibonisa ukuba iOfisi yoLawulo lwaMandla eSichuan icwangcise ukudibana kwiveki ezayo ukuze kuxoxwe ngeziphumo zemigodi yeBitcoin. Umbhali wekholamu ovela kwindlu yeendaba exhaswa ngurhulumente i-Global Times wathi:
"IOfisi yoLawulo lwaMandla eSichuan ibhengeze ngoLwesine ukuba le ofisi [izakubamba] intlanganiso ngoJuni 2 ukuqonda ngokupheleleyo imeko yemigodi ye-crypto-currency kwiphondo elisemazantsi-ntshona, nelifunwa nguLawulo lwezaMandla kuZwelonke."
Intatheli kule ngingqi, uColin Wu, kutshanje uthumele umyalezo ngetwitter ukuba zikhona “Amarhe okuba i-China izakuzisa umgaqo-nkqubo wokukhwabanisa ngoLwesihlanu ebusuku."
Nangona kunjalo, la marhe apheliswa njengoko imizuzu yentlanganiso yoLawulo lwaMandla eSichuan yaziswa. Uqikelelo lubonisa ukuba iphondo laseSichuan kunye nommandla waseXinjiang e-China zezona ndawo zigxile kubasebenzi basezimayini baseBitcoin.
Amachibi eMigodi yeDijithali yemali eChina Akhawunti ze66% yeHlabathi liphela le-BTC
Ukusukela izolo, uthungelwano lweBitcoin's hashrate luye ngaphezulu kwe-165 exahash ngomzuzwana (EH / s) uphawu. Izibalo zibonisa ukuba amachibi aphezulu emigodi aneyona hashrate iphezulu avela e-China.
Okwangoku, amachibi aphezulu emigodi anikezela eyona hashrate kwinethiwekhi yeBitcoin ibandakanya iF2pool, iAntpool, iViabtc, iBtc.com, kunye nePhuli. Amachibi amakhulu emigodi akhiwe e-China malunga ne-66% ye-Bitcoin hashrate yomhlaba.
I-Iran iyeke okwethutyana ukuSebenza kweMigodi ye-Cryptocurrency kulandela ukuCima okuMnyama
UMongameli wase-Iran, u-Hassan Rouhani, ubhengeze ukuvalwa kweenyanga ezine kubo bonke imigodi ye-cryptocurrency imisebenzi phambi kokhetho. Isibhengezo sifike ngolwe-Lwesithathu, usuku emva koMphathiswa wezaMandla e-Iranian, u-Reza Ardakanian, waxolisa ngokusika umbane ngokungalindelekanga kwizixeko ezikhulu.
Amagosa aseburhulumenteni aseIran ahlala egxeka ukungabinayo ilayisenisi yokusebenza kwemigodi ye-cryptocurrency yokusebenzisa isixa esikhulu sombane. Ngo-Septemba wonyaka ophelileyo, u-Rouhani, kwingxelo ye-TV, wabhengeza ukuba:
"Imisebenzi ye-Cryptocurrency, kunye nemigodi yeedigital cryptocurrencies, kufuneka imiswe."
Ukucinywa kwamandla kwiinyanga zehlobo zasehlotyeni yinto eqhelekileyo e-Iran. Nangona kunjalo, ngeli xesha ngeenxa zonke, iTehran kunye nezinye izixeko ezikhulu zafumana ukucinywa okungacwangciswanga, oko kwabangela isiphithiphithi sokugxekwa kubathengi nakumashishini. Ilizwe laqala ukuqengqa ukucinywa kwamnyama ukusukela ngeCawa ukunciphisa uxinzelelo kwigridi yesizwe.
URouhani utyhile ukuba abasebenzi-mgodini abangena mthethweni abanofikelelo kwinkxaso yombane basebenzisa i-7x ngaphezulu kunaleyo ineemvume.
Umphathiswa u-Reza Ardakanian wenze uxolo esidlangalaleni kubantu base-Irani ngoLwesibini “Iintsilelo noxinzelelo” ngaphezulu kokunqunyulwa kwamandla okungalindelekanga. U-Ardakanian uqaphele ukuba iigridi zikazwelonke zithwele nzima ngenxa yembalela echaphazela ukuveliswa kombane kunye nemozulu eshushu engalindelekanga, ebangela ukusetyenziswa kwemeko yomoya.
Ukuchithwa kweeFama zeDigital cryptocurrency
Ngeli xesha, isithethi sombane kuzwelonke uMostafa Rajabi Mashhadi uxele ngoMgqibelo odlulileyo ukuba iifama ezinemvume yokumba imigodi ye-crypto ziyeke ngokuzithandela ukusebenza ukunciphisa umthwalo kwigridi.
Imigodi yeBitcoin kunye nezinye i-cryptocurrensets zifuna umbane omkhulu ukunika amandla uninzi lweekhompyuter kunye nemigodi yemigodi enikezelwe ekusombululeni ii-algorithms. Ezinye iingxelo zibonisa ukuba imigodi ye-cryptocurrency isebenzisa umbane ongaphezulu kunezizwe zonke.
UMichel Rauchs, ingcali ye-cryptocurrency kunye nomcebisi, uqaphele ukuba phakathi kwe-5 kunye ne-10 yepesenti yayo yonke imigodi yeBitcoin eyenzeka eIran.
tags Cryptocurrency, umbane, Iran, UKUSHUMAYELA, iindaba